Stalker lalao - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
raha manana Vakio ny boky mikasika ny stalkers, ny ankizilahy manomboka ny nanonofy mba ho ao an-toerana ka nahita kokoa ny sisa tavela amin 'biby goavam-be, manangona rakitry ny ela sy hijery mamoaka taratra fandrika. Raha ny marina, ireo faritra misy afa-tsy ny ditry ny mpanoratra sy ny lalao an-tserasera vokatra. Raha tsy mahaliana ny hijery toerana toy izany, misokatra sy malalaka Stalker lalao tsy hisy hanelingelina milalao, mitifitra mutants sy ny fanangonana mahagaga zavatra madinika. Samy ho entiko ho tombontsoa sy ny fahaiza-manao. Fifaliana ny sasany, fa ny hafa kosa dia tsara kokoa fitoeran nambenana tao an-voaisy tombo-kase mba tsy hijaly.
Lalao Stalker tamin'ny Category:
Ny tsara indrindra Stalker lalao
Mitifitra tany an-efitra 2
Olona voalohany shooter 3
Raiso ny tany 2
Ny olona rehetra mahalala ny lalao Stalker, izay tsy mitsahatra mihaza biby goavam-be
Lalao Online Rehetra Stalker lalao
Games Stalker: a nofinofy sy ny zava-misy
Stalker. &Ndash; phantasmagoric kilalao Nanjary mifototra amin'ny tantara avy Strugatsky: « amoron-dalana hitsangatsangana », mahagaga zava-nitranga izay dalam-pandrosoana eo amin'ny faritanin'i faritra amin'ny anomalous. Fa ny mpanoratra ny lalao nandeha mialoha ary nalefa tany Chernobyl Heroes – fanilikilihana faritra taorian'ny loza nitranga tao amin'ny foibe nokleary, izay eo ambany fitaoman 'ny taratra manan'aina na tsy manan'aina raharaha nandalo mutation. Ny lohahevitra dia lasa malaza be sy mamorona fa tsy afaka mahita ny tsy mpanoratra tantara foronina ny boky siansa ary nanomboka hampivelatra azy amin'ny lalana samy hafa. Ankehitriny, sarotra ny dia ho hita fa ny olona izay tsy mahalala ho momba ny fahagagana mitranga ao amin'ny Okrainiana faritany, indray mandeha isan-tanàna be mponina.
Metamorphoses sakadia ireo saka maha
Ary, izay ankizy nilalao, sasatra mpivady amin'ny fitiavana, miasa ny olona samy hafa asa matihanina, rakotry amin'ny bibidia kirihitrala izy, Rava attraction mihazakazaka biby mpihaza hafahafa, ary na dia tena mampihetsi-po vato-. Tsy misy intsony ny inona izany indray mandeha i.
Izay mety ho zavamaniry afaka hamotika olona iray tsy hita maso vortex afaka notapatapahina, vato manana ny fahaiza-manasitrana sy hamono mampihetsi-po fotsiny. Ny tontolo miova na oviana na oviana sy miova isan'andro, indrindra taorian'ny fanafahana ny taratra.
ny mponina amin'ny faritra nampidi-doza
Anisan'ny manana maimaim-poana ny endri-tsoratra stalkers – Mpikaroka faritra mampidi-doza sy searchers asa tanana; ny miaramila; mpividy sy ny mpahay siansa. Samy voatendry ny amin'ny anjara toerana sy ny fiandohan'ny ny lalao dia afaka misafidy izay tianao ho tonga. Stalkers afaka miray hina manao fokony sy mandeha mihaza ny mandroso drafitra, ary te ho afaka, manana ny zo hanao izany, fa avy eo dia very tombontsoam-panompoana maro. Tany am-boalohany ny lalao dikan-nanjary fantatra lavitra be any an-dafin'ny amin'ny sisin-tanin'i ny tanindrazany, ary nahazo ny firaisam-po ny mpankafy maro.
ny toetra mampiavaka ny lalao Stalker
Nanomboka tao amin'ny lalao an-tserasera Stalker hilalao maimaim-poana ianao, dia ho hitanao ny lalao mpandefa zana toy ny am-boalohany, izay misy singa fantatra.
ianao manana be dia be ny hitifitra sy hifindra any amin'ny toerana, ny fisorohana ny fifandonan'ny planeta amin'ny biby sy ny milisy mahery setra tafika mitam-piadiana.
Hanao anao sy ny safidy ny fitaovam-piadiana, nisy koa ny fahafahana hanova azy io nandritra ny shootout. Mba hanitarana ny piadiana, haka ny basy sy ny ammo, iza no hitsena anao teny an-dalana. Ny sasany dia voatahiry ao baoritra, fa ny hafa kosa maty Mitete ny fahavalony.
Indraindray, mba hahazo iray hafa zavatra mahasoa, dia tsy maintsy hahita ny fehezan-dalàna ho an'ny soa aman-tsara na valizy.
Ankoatra ny fitaovam-piadiana, dia ho ilaina amin'ny mahazatra fananana asa tanana, ary koa ny fanafody mba ho an'ny fiainana.
mihetsika ao amin 'habakabaka, tokony ho tsaroantsika mandrakariva fa tsy izany fotsiny fiofanana tany ho an'ny tifitra, ary raha tsy fahavalo bala minitra, eo ambanin'ny tongony dia afaka ny ho tena mampidi-doza zavatra izay efa mahita ny tsipika eo ambany fitaoman' ny taratra.
alohan'ny fanaovana ny dingana manaraka, dia tsara kokoa ny hanipy ny tenako eo anoloan'ny iray bazana na vato, mba ho azo antoka ny fiarovana ny olom-tari-dalana. Raha ny zavatra no nandatsaka, ary na inona na inona nitranga, dia afaka soa aman-tsara mandroso eo. Raha bounced Izy ka nanidina tao amin'ny tari-dalana ny iray misafotofoto, ianao Te tsara kokoa ny tsy handeha any raha tsy te-ho very ny ainy.
Raha mahita nahavita zavatra manokana teo amin'ny endrika vaovao ny fiainana ao amin'io faritra io, dia afaka hifandray amin'ny mpivarotra sy mivarotra ny vokatra amin'ny vidiny avo, na hanakalo azy ho fitaovana mahasoa ho an'ny mpahay siansa. Fa tandremo, fandrao azon'ny – ny olona rehetra te hamitaka, mba hampihenana ny maha zava-dehibe ny mahita sy hahazo ny tombontsoa.
mifototra amin 'ny faritra mampidi-doza sy ampoizina mihitsy isan'andro, dia, lasa Stalker, mitandrema.